जस्तोसुकै भयानक जोर्नी दुखाईलाई पुर्णरुपमा निको पार्ने यो अचुक घरेलु औषधी, जानीराखौँ ! - ज्ञानविज्ञान
जस्तोसुकै भयानक जोर्नी दुखाईलाई पुर्णरुपमा निको पार्ने यो अचुक घरेलु औषधी, जानीराखौँ !
यसका लागि हामीलाई चाहिने सामग्रीहरु:
सुरुमा दुई ओटा ठुलो कागती लिने । यदि कागती सानो छ भने ३-४ ओटा लिन सकिन्छ । अब यी कागतीको बोक्रा निकाल्ने । बोक्रा निकाल्दा सानो टुक्रा पार्नु भन्दा अलि ठुलो र लाम्चो आकारमा निकालेको राम्रो हुन्छ । सबै कागतीको बोक्रा निकालिसकेपछी… सम्पूर्ण बोक्रालाई एउटा सफा सिसाको जारमा राख्ने र यसको माथिबाट ओलिव ओइल राख्ने (मिसाउने)। याद राख्नुहोस् कि ओइल राख्दा खेरी यसले कागतीको बोक्रालाई पुर्ने (डुबाउने) गरी राख्नु पर्छ । त्यसपछि राम्रो सँग जारको ढकन लगाएर यसलाई २ हप्तासम्म राख्नुहोस् । (यदि तपाइँ सँग घरमा सिसाको सानो जार छैन भने ढकन भएको अन्य सिसाको बट्टा,कप अथवा भाँडामा राख्न सकिनेछ) ।
प्रयोग गर्ने विधि :
Topics #जोर्नी #जोर्नी दुखाई #हातगोडा #हातगोडा बाउँडिनेका कारण
Don't Miss it ग्याष्ट्रिक के हो, किन हुन्छ ग्याष्ट्रिक, यदि ग्याष्ट्रिक भइहालेमा के खाने ? जानकारी लिनुहोस् !
Up Next दिमाग खियाउँने प्रश्नहरु – के तपाई जवाफ दिन सक्नु हुन्छ ?
कस्तो खानेकुरा गर्मीमा सही हुन्न र त्यसले कसरी रोग निमत्याउछ भन्ने बारे तल उल्लेख गरीएको छ
पिनास भनेको के हो ? यसका लक्षण, सावधानी र उपचार को बिसयमा हामीले हिजोनै पर्याप्त छलफल गरिसरेका छौ |आज हामी…